Kooxda Real Madrid oo dalab weyn ka gudbisay mid ka mid ah xiddigaha loogu doonista badan yahay suuqa kala iibsiga – Gool FM
(Madrid) 06 Juun 2020. Sida wararku ay sheegayaan Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa dalab weyn ka gudbisay mid ka mid ah xiddigaha loogu doonista badan yahay suuqa kala iibsiga xiddigaha.
Real Madrid ayaa dalab qaali ah ka gudbisay xiddiga reer Jarmal ee Kai Havertz, kaasoo ka mid ah kuwa loogu doonista badan yahay suuqa kala iibsiga xagaagan, iyadoo markii horena Los Blancos ay ka mid ahayd kooxaha xiiseynayey adeeggiisa.
Sida la warinayo haatan Real Madrid ayaa dalab dhan 80 milyan oo euro oo u dhiganta 71 milyan oo gini ama 90 milyan oo doolar ka gudbisay xiddiga hibada leh ee Kooxda Bayer Leverkusen, Kai Havertz.
Wargeyska Bild ee ka soo baxa dalka Jarmalka ayaa warinaya in Los Blancos ay dalab 80 milyan oo euro ah ka soo gudbisay 20-sano jirkaan, laakiin kooxda ka ciyaarta Bundesliga ayaa rajeynaysa inay ugu yaraan 100 milyan euro oo u dhiganta 89 milyan oo gini ama 113 milyan oo doolar ku hesho ciyaaryahankeeda.
Havertz oo sidoo kale ay xiiseynayso Bayern Munich ayaa dhaliyay 15 gool, isla markaana abuuray siddeed caawin ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan.
Sidoo kale xiddigan kooxaha doonaya saxiixiisa waxaa ka mid ah Manchester United iyo Liverpool kuwaasoo ka wada ciyaara horyaalka Premier League.
Lautaro Martinez oo hal tallaabo u jira ku biirista kooxda Barcelona... (Maxaa soo kordhay? Maxaase harsan?)